ကတွတ်ပေါက် ဘဲဥစောင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကတွတ်ပေါက် ဘဲဥစောင့်
Posted by Ma Ma on May 15, 2013 in Creative Writing, News | 53 comments
ယာဉ်ကြောအချက်ပြ အမှတ်အသား ရေးမိရေးရာ လက်စမ်းစာပေ
မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့က ဆင်မလိုက်လမ်းဆုံမီးပွိုင့်ကို သိကြပါသလား။
မြို့ထဲကလာတဲ့ကန္နားလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းအစနဲ့ နာနတ်တောကုန်းကျော်တံတားအဆင်း၊ လှည်းတန်းကုန်းကျော်တံတားအဆင်း……..
အဲဒီမီးပွိုင့်မှာ လှည်းတန်းကုန်းကျော်တံတားအဆင်းလမ်းကနေ ဘုရင့်နောင်လမ်းကိုဝင်ချင်ရင်
များသောအားဖြင့် မီးပွိုင့်မ၀င်ခင် အကွေ့လမ်းကြောအတွက် လမ်းခွဲတွေဟာ တစ်လမ်းမောင်းပဲ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်တော့ အဲဒီလိုပဲ သိထားပါတယ်။
(အကွေ့လမ်းခွဲတွေမှာ နှစ်လမ်းမောင်းရှိကြောင်း သိတဲ့သူတွေလည်း သိကြမှာပါ။)
အဲဒီ လှည်းတန်းကုန်းကျော်တံတားအဆင်းလမ်းကနေ ဘုရင့်နောင်လမ်းကိုဝင်တဲ့ လမ်းခွဲလေးကတော့ နှစ်လမ်းမောင်းဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်လမ်းမောင်းဖြစ်တာကြောင့် ဘုရင့်နောင်လမ်းက လှည်တန်းကုန်းကျော်လမ်းဘက်ကို ၀င်မယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီလမ်းခွဲလေးကပဲ ၀င်ရပါတယ်။
ဘုရင့်နောင်လမ်းဘက်ကလာရင် ဆင်မလိုက်မီးပွိုင့်ကို မ၀င်ခင်မှာ
အဲဒီလမ်းခွဲလေးနေရာမှာ (ဘုရင့်နောင်လမ်းရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာ) လမ်းလယ်တုံးတွေကို ပိတ်မထားပဲ ကားကွေ့သွားနိုင်အောင် လမ်းဖွင့်ပေးထားပါတယ်။
မီးပွိုင့်ကိုဝင်တဲ့ ယာဉ်ကြောပြမျှားမှာလည်း အတည့်ယာဉ်ကြောအတွက်ပဲ မျှားပါပြီး
များသောအားဖြင့် ဘုရင့်နောင်လမ်းကနေ လှည်းတန်းကုန်းကျော်တံတားဘက်ကို သွားတဲ့ကားတွေဟာ ဘယ်ဘက်လမ်းခွဲကနေ သွားရမယ်ဆိုတာကို များသောအားဖြင့် မသိကြပဲ
(လမ်းခွဲကို နှစ်လမ်းမောင်းဖြစ်နေမယ်လို့ မသိကြပဲ)
လမ်းကြောမှားပြီး မီးပွိုင့်ကနေ လှည်းတန်းလမ်းဘက်ကို လမ်းမှားပြီးကွေ့ဝင်ကြမယ့် ကားတွေအတွက် အဲဒီ ကတွတ်ပေါက်မှာ ဗျိုင်းမစောင့်ပဲ…..
ကိုယ့်ရဲ့ မသိနားမလည်မှု၊ ချို့ယွင်းမှုကြောင့် မှားမိခဲ့သောအမှားကို
အားလုံးသော မိဘပြည်သူအပေါင်းတို့ သတိထားနိုင်ကြစေဖို့…………
ရွာထဲမှာ ကြေညာစာကပ်၍ စေတနာရှေ့ထား အသိပေးအပ်ပါတယ်။
တလက်စတည်း ပြောချင်တာလေးတွေ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့…….
အမျိုးမျိုးသော လမ်းစည်းကမ်းတွေ၊ မီးပွိုင့်အမှတ်အသားတွေကို စနစ်တကျဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
စနစ်တကျဖြစ်ဖို့အတွက် ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို လူအများသိရှိရလေအောင် မီဒီယာများမှတဆင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသိပညာပေးစေလိုပါတယ်။
ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသိပညာပေးတာထက်….
မသိသေးတဲ့သူတွေကို ကတွတ်ပေါက် ဗျိုင်းစောင့်သလို စောင့်ပြီး စားပေါက်ထွင်တာမျိုးလည်း မဖြစ်စေလိုပါ။
လူအများသိစေချင်လို့ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အသိပေးတဲ့အခါမှာ …
ဖေ့စ်ဘုတ်လို လူမှုရေးကွန်ယက်တွေကနေ အသိပေးရင် အင်မတန်ကျယ်ပြန့် မြန်ဆန်နိုင်ပါတယ်။
(ခုလတ်တလော မဟာဆန်သူရဲ့ လှုပ်ရှားမှု့ နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကို ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ စောင့်ကြည့်သိရှိနိုင်ကြပါတယ်။)
လမ်းဆုံတွေမှာ ထားရှိတဲ့ အချက်ပြမီးပွိုင့်တွေ ကိစ္စကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
အချို့သော လမ်းကြောင်းတွေမှာ အကွေ့လမ်းကြောကို စစချင်း မီးပွိုင့်စိမ်းတဲ့အခါမှာ ပေးပြီးးး
အချို့သော လမ်းကြောင်းတွေမှာ အကွေ့လမ်းကြောကို မီးပွိုင့်ဝါတဲ့အချိန်မှာ ပေးပါတယ်။
ကိုယ်သွားနေကျလမ်းမို့ လမ်းကြောသိထားရင် အရေးမကြီးပေမယ့်….
ကိုယ်သွားနေကျ လမ်းကြောင်းမဟုတ်တဲ့အခါမှာ အကွေ့ယာဉ်ကြောအတွက်
မီးပွိုင့်စိမ်းတာနဲ့သွားရမလား၊ မီးပွိုင့်ဝါမှပဲ သွားရမလားဆိုတာကိုမသိပဲ အခက်အခဲတွေ့ရပါတော့တယ်။
ယာဉ်ကြောတစ်ကြောမှာ အကွေ့မျှားပါလား မပါဘူးလား၊ အတည့်ယာဉ်ကြောအတွက်ချည်းပဲလား ဆိုတာကို ကြိုမမြင်ရတဲ့အခါ……..
မီးပွိုင့်ဝင်ခါနီး (မျဉ်းသေရောက်မှ) လမ်းညွှန်မျှားကို တွေ့တဲ့အခါမှာ……..
ကိုယ်ယူချင်တဲ့ယာဉ်ကြောကို ပြောင်းချင်လို့ မရတော့ပါဘူး။
တခါတရံ ကားတစ်စီးနဲ့တစ်စီးဆက်နေတဲ့အခါမှာ ယာဉ်ကြောအချက်ပြတဲ့မျှားကိုတောင် မတွေ့လိုက်တာမျိုး ရှိပါသေးတယ်။
အဲဒါကြောင့် ယာဉ်ကြောပြတဲ့ မျှားတွေကို မီးပွိုင့်မ၀င်ခင် ခပ်ဝေးဝေး မျဉ်းပြတ်တွေမှာကတည်းက (ကိုယ်သွားလိုတဲ့ ယာဉ်ကြောကို ရွေးချယ်နိုင်စေဖို့) လမ်းပြပေးစေချင်ပါတယ်။
ဘတ်စကားတွေ ယာဉ်ကြောပိတ်ရပ်ပြီး ကုန်တင် လူတင် လူစောင့်ခေါ်လုပ်လေ့ရှိတာမို့
မကြာခဏယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပြီး လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ကားတွေကြပ်ကုန်ပါတယ်။
မဟာရန်ကုန်ကားလမ်းပိတ်ဆို့မှု၊ လမ်းကြပ်မှုပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်တစ်ခု ကို ပြောရမယ်ဆိုရင်…
ဘတ်စ်ကားတွေ စည်းကမ်းမဲ့ လမ်းပိတ်ဆို့ရပ်တန့်တာလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
သီရိမင်္ဂလာဈေးရှေ့ကို နံနက်စောစော ဖြတ်သွားလေ့ရှိရာမှာ အမြဲလိုလို လမ်းပိတ်ကြပ်နေလေ့ရှိလုိ့ အေးရိပ်မွန်အိမ်ရာဝင်းဘက် အတွင်းလမ်းကနေပဲ ဖြတ်သွားလေ့ရှိပါတယ်။
တစ်ရက်တော့ ကားမကြပ်လို့ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးအတိုင်းသွားကြည့်တော့ …
လမ်းလယ်မှာ လမ်းရှင်းနေတဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲကို တွေ့လို့ ကျေးဇူးတင် ၀မ်းသာမိပါတယ်။
(အဲဒီအကြောင်းကို ပိုစ့်တစ်ခုမှာတောင် ရေးလိုက်မိသေးတယ်။)
နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့ လမ်းရှင်းပေးတဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲကို မတွေ့ရတော့ပဲ……
လမ်းက ကြပ်မြဲအတိုင်း ကြပ်နေပါတော့တယ်။
ရန်ကုန်မြို့မှာ ယာဉ်ထိန်းရဲအရေအတွက် မလုံလောက်ဘူးလို့
(ဘယ်သတင်းစာ၊ စာစောင်၊ ဂျာနယ်မှန်းမမှတ်မိပါ) ဖတ်သိရဖူးပါတယ်။
သီရိမင်္ဂလာဈေးရှေ့က (ယခုရက်ပိုင်းမှာ ကျောင်းလခတွေ တိုးမြှင့်လို့ ကျောင်းသားမိဘတွေ ဆန္ဒပြကြတယ်ဆိုတဲ့) အင်တာနေရှင်နယ်ကျောင်းကြီးရဲ့ ကျောင်းတက်ချိန်မှာ အဲဒီလမ်းပေါ်က ဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာတော့……
ဘတ်စကားတွေကို ဈေးရှေ့မှာ မရပ်ခိုင်းပဲ ရှေ့အလွန်မှာသာရပ်ခိုင်းပြီး …
ကျောင်းသားကြိုပို့ကြတဲ့ ကားတွေကို လမ်းရှင်းပေးနေတာတွေ့ရတော့….
အော် …. ဒီလိုတော့လည်း လမ်းကိုရှင်းလို့ ရနိုင်သေးတာပဲလို့ တွေးမိပါတော့တယ်။
ဘဲဥလို့ မခေါ်ဘဲ ဗျိုင်းအုလို့သာ ခေါ်လိုက်ချင်……………………..
ဘဲဥလား ဗျိုင်းဥလား မသိပေမယ့်…
ရွှေဥတော့ ဥ တယ်။
မ မမ ပြောတဲ့ လှည်းတန်း(လမ်းခွဲကို နှစ်လမ်းမောင်းဖြစ်နေမယ်လို့ မသိလို့)ကျုပ်ကိုယ်တိုင်
မီးပွိုင့်ကနေပဲ ကွေ့ လိုက်မိလို့ တစ်ခါအဖမ်းခံရဖူးပါတယ်ဗျာ..
နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် မ မမ ရေ….
တဲ့ကားအတွက်ဖရီးဝေးရှိနေလို့ ရပ်စရာမလိုပါဘူး..မီးပွိုင့်က ရွာမကျောင်းလမ်းဖက်ကိုကွေ့မဲ့
ကားတွေအတွက်ပါပဲ..ဒါပေမဲ့ ဖရီးဝေးသတ်မှတ်ပေးတဲ့ မျဉ်းသေက လမ်းပေါ်မှာမမြင်ရတော့ပါဘူး..
သွားနေကျလူတွေက သိပေမဲ့ ဧည့်သည်ကားတို့..လမ်းမကျွမ်းသူတို့ကတော့ တစ်ခါတလေ
မီးနီနေတာတွေ့ရင် ရုတ်တရက်ထိုးထိုးရပ်တော့ နောက်ကားက၀င်ဆောင့်ပါတော့တယ်….
အဲလိုမျိုးအလားတူ ကျုပ်ကိုယ်တိုင် ဘုရင့်နောင်လမ်းပေါ်က ပါရမီလမ်းနဲ့ဆုံတဲ့မီးပွိုင့်မှာ ဖရီးဝေးကိုမသိပဲ
ငါတို့ ဘရာသာမိုက်လည်း ခံဖူးတယ်ဆိုတော့ အဖော်ရတာပေ့ါ။
ကိုယ်တိုင်တော့ ကားမောင်းတာလည်း မကျွမ်း၊ လမ်းလည်း မကျွမ်းတော့….
မဖြစ်မနေ ကားမောင်းရရင် မျက်လုံးက ကျီးကန်းတောင်းမှောက် ကြည့်နေရတယ်။
အဲဒါကြောင့် ကိုယ့်လို သူများတွေ မမှားရအောင် သတိပေးချင်စိတ်ပေါ်လာပြီး ဒီပိုစ့်ကိုတင်ဖြစ်တာ။ :eee:
တနေ့က သတင်းမှာ တွေ့လိုက်တယ် အိမ်စီး လေယဉ်ပျံကား လာတော့မယ်တဲ့.. အဲဒီကြမှ မော်တော်ပီကယ် ကိုရွှေဘဲဥကို လွမ်းမနေနဲ့နော် အမ်တီမမ..
အဲဒါဆို ခုကတည်းက ကိုရွှေဘဲဥကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး အိမ်မှာ ချိတ်ထားရမလို ဖြစ်နေပြီ။
အဲဒီအချိန် ဘဲဥ က လဲ မိုးပေါ်ရောက်နေမှာ။
From the Jetsons to Blade Runner, the idea of the flying car has captivated commuters dreaming of congestion-free journeys and complete travel freedom.
Last week, aircar builder Terrafugia announced the TF-X,anew model that can take off vertically. The company is also planningacar called the Transition that will go on sale in 2015.
Is the reality of aircar travel finally here? We look back over nearly 100 years of man’s attempt to createaflying car and ponder if the idea ofacar-plane will ever leave the ground?
On Bing: more pics of flying cars
First flight of the Terrafugia flying car
Watch the flying car take to the skies in video
The 200mph flying car
Revealed: the 300mph flying car
ကျနော်လည်း ဦးကြောင်ကြီး သတင်းမှာ တွေ့လိုက်တဲ့ အိမ်စီး လေယဉ်ပျံကား လာမှ ဘဲ ၀ယ်တော့မယ်။
ခု ကား တွေ က ဈေး တော့ အတန်အသင့် ချို ပါရဲ့ လမ်း ကျဉ်းတော့ မ၀ယ်ချင်သေးဘူး။
မြို့ထဲ လမ်းမတွေ အားလုံး ၈ လမ်းသွား လုပ်လိုက်ရင် တော့ မဆိုးဘူး။ ပြည်လမ်း ကမ်းနားလမ်း ဘုရင့်နောင်လမ်း ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း အစရှိသည်တို့ ကို ပြောတာ ပါ။
ဂွတ်ရဲ့ အိုင်ဒီယာက ဂွတ်တော့ ဂွတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်သက်တမ်းနဲ့ မီ ပါ့မလား။ :buu:
ကျနော် ဆီဒိုးနားဟိုတယ်မှာ ဝန်ထမ်းလုပ်တုန်းက အဲဒီဟိုတယ်ရှေ့ မီးပွိုင့်မှာ
ခဏ ခဏ တိုက်ကြတာကြုံဘူးတယ် ၊
အဲဒီပွိုင့်မှာ ကမ္ဘာအေးဘက်က မြို့ထဲအသွားလမ်းကြောင်းမှာ ကွေ့ကြောကသာ ပွိုင့်ကိုကြည့်ရပြီး ကျန်လမ်းကြောက ဖရီးဝေးပါ ၊
ဒါပေမယ့် မီးပွိုင့်အချက်ပြတိုင်က ဘယ်ဘက်ဖရီးဝေး အပေါ်တည့်တည့်ဆိုတော့
မသိတဲ့ကားက ကိုယ့်ကို အနီပြတယ်ထင်ပြီး ထိုးရပ် နောက်ကကောင်က ဝင်ဆောင့်
ဒါ ဘယ်သူ့အပြစ်လို့ပြောကြမလဲ ?
ဆင်မလိုက်မီးပွိုင့်ကတော့ ကိုယ်နေ့တိုင်းသွားနေကျပွိုင့် ဖြစ်ပါလျှက်….
ဘုရင့်နောင်လမ်းဘက်က မီးပွိုင့်မ၀င်ခင်မှာ လမ်းပေါက်ချန်ပေးထားတာလည်း တွေ့ပါလျှက်နဲ့
သတိမမူ ဂူမမြင်ဆိုသလိုပဲ မီးပွိုင့်က ကွေ့ရမယ်ပဲ ထင်မိတာကို တဖြစ်တောက်တောက် ဖြစ်မိလို့။ :eee:
ကားတွေကများလာတော့ တစ်စီးနဲ့တစ်စီး ကပ်မောင်းနေကြရတာ …
ရှေ့ကကားက ဘာမှန်းမသိ ရုတ်တရက် ရပ်ပစ်လိုက်ရင် နောက်ကနေ တန်းစီပြီး တိုက်ကြရော ..
ကျွန်မတို့အိမ်က ကားတစ်စီး တစ်လထဲမှာ နှစ်ကြိမ်တောင်မှ အနောက်ကနေ ၀င်အောင်းခံရတာ …
တကယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကလဲ မမှားဘူး … နောက်က ၀င်တိုက်တဲ့ကောင်ကလဲ မမှားဘူး … အရှေ့က ရုတ်တရက်ရပ်လိုက်တဲ့ကောင်က မှားတာ .. ဒါပေမယ့် ခံလိုက်ရတာက အတိုက်ခံရတဲ့ကောင်နဲ့ လာတိုက်တဲ့ကောင် … အခုတော့ ရိုးသွားပြီ .. ကိုယ်ကလဲ မတိုက်မိအောင် သတိထားနေရပြီး ကိုယ့်ကို လာတိုက်တာကိုတော့ လူမထိသရွှေ့ ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး ..
ဝေေ၀ပြောမှ အိန္ဒိယရောက်တုန်းက ကြားဖူးတာလေး သွားသတိရမိတယ်။
အဲဒီမှာ ကားတွေကများ လမ်းကကြပ်တော့ ကားအချင်းချင်းထိမိရင် ဘယ်ကားကမှ ဆင်းကြည့်မနေဘူးတဲ့။
သူ့လမ်းသူသွား၊ ကိုယ့်လမ်းကိုယ် ဆက်သွားလိုက်တာပဲတဲ့။
ဒီမှာလည်း နောင်ဆို အဲလိုများ ဖြစ်လာမလား မဆိုနိုင်ဘူးနော်။
သြော် မြို့ရွှေရန်ကုန်ရဲ့ ယာဉ်ကြောသတ်မှတ်ချက်ကလည်း မျက်စိတောင်လည်ပါရောလား။
ခင်ခ တို့ ရန်ကုန်လာဖြစ်ရင် ရန်ကုန်အ၀င် မင်္ဂလာဒုံ ကထဲက ယာဉ်ထိန်းတစ်ဦးကို နေ့ကြေးနဲ့ ဌားရရင် ကားပေါ်ဌားပြီးတင်ချင်စမ်းပါဘိ။ လမ်းပြပေးဖို့လေ။
ဒါပေမယ့် နေ့ကြေး ဘယ်လောက်များ ရှိမယ်မသိလို့…
ဖြစ်လာမှ ကြည့်ရှင်းလိုက်တာကမှ တော်နေအုံးမယ်။ :harr:
နံမည် အလွဲသုံးဇားလုပ်မှု့နဲ့ တစ်ရာဆွဲပလိုက်မယ် ဒါဗျဲ
ရော့အင့် ၁၀၀၀ ယူသွား
ပိုတာ ကို ဆေးပေါ့လိပ် ဝယ်ခဲ့
မိုးအေးအေး နဲ့ 
ဘဲဥ တို့ ကတော့
ကဆုန် နယုန်မှာကွယ် ရွှေမိုးလေးတွေညိုတော့ အရက်ဖိုးလေးက လိုတယ် :harr:
နံမည် အလွဲသုံးဇားလုပ်မှု့နဲ့ တစ်ရာဆွဲပလိုက်မယ် ဆိုတော့…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၀ယ်ပြီး ပြုတ်သုပ်စားပစ်လိုက်မယ်။
ဒါဆို အရက်ဖိုးပေးစရာ မလိုတော့ဘူး။ :harr:
ပညာရှိမောင်ပေရဲ့ ဖြေရှင်းနည်းက မိုက်တယ်။
၁၀၀၀ ပေးပြီး ဘဲဥကို ခိုင်းစားလိုက်နိုင်တယ်။ :hee:
အဲဒီ ဘဲဥ ကို ချက် စားကြကွာ
ဒို့ ရွာထဲက ဘဲအု ကို မဆိုလို
ဘာ ဘဲဥဖြစ်ဖြစ် ချက်စားလိုက်တာ အေးပါတယ်။
ဘယ် ဘဲဥကို မဆို ချက်စားလို့ ရပေမယ့်…
ရွာထဲက ဘဲဥကိုတော့ လက်ဖျားနဲ့တောင် မတို့နဲ့။
လက်ထဲထည့်ပြီး ပစ်ချရုံလောက်ဆို တော်သေး။
ဟုတ်တယ် ဘဲဥ က ငုံးဥကိုစောင့်နေရတာဘဲဟာ
ပြည်လမ်းမှ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်သို့အဝင်မှာလည်း
ထိုကဲ့သို့နှစ်လမ်းမောင်း ဖရီးဝေး ဖြစ်ပါကြောင်း ခင်ဗျ ။
ဆိုတော့ ကာ ….ထင်ရတာတော့ပိုက်ပိုက်ပေးလိုက်ရပြီထင်တယ်
ပညာရှိ ရာမညတွေးကြည့်တာ ပြေးကြည့်သလိုပါပဲလား။
(ပြည်လမ်းမှ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်သို့အဝင်မှာလည်း
ထိုကဲ့သို့နှစ်လမ်းမောင်း ဖရီးဝေး ဖြစ်ပါကြောင်း ခင်ဗျ။)
မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ ရှင့်။ :hee:
မမ ပြောတဲ့လမ်းကို မျက်စိထဲ မြင်ကြည့်မိတယ်။
ဘုရင့်နောင်လမ်း (ရေကြောင်းသိပ္ပံ ဘက်က လာတဲ့ လမ်း) ဘက်က လာရင် ညာဖက် ဖရီးဝေး က သိရိမင်္ဂလာဈေး(အဟောင်း) ကိုသွားတဲ့ ဘက်မဟုတ်လား။
အဲဒီလမ်း ကို သုံးလေ့ရှိတယ်။
ဘယ်ဘက် လှည်းတန်းဈေးဘက် ကို သွားရင် ဘယ်ဘက်က ဖရီးဝေးကို သုံးရတာ လုံးဝ (လုံးဝ) မသိခဲ့ပါ။
ပြန်မြင်ကြည့်တော့ အတော်လေး ထွက်ရခက်ပြီး အန္တရာယ်များတဲ့ ပုံစံ ပါဘဲ။
ညာဖက်က နေ ဘယ်ဘက် ဖရီးဝေးကိုသွားရဖို့ တစ်ဖက်ကားတွေကိုလဲ စောင့်ရဦးမယ်။
ဒီမှာတင် ဖရီးလမ်း အကျဉ်း လေးထဲ မှာ လှည်းတန်းဖက်ကနေ ဖရီးလမ်းကိုယူပြီး ကွေ့လာတဲ့ ကားနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့နိုင်တယ်။
နောက်တော့ လှည်းတန်းဘက်ကို ဝင်ဖို့ ကိုယ်က ဘယ်ဘက်ရောက်နေလို့ ညာဖက်လိုင်း ကို ဝင်နိုင်အောင် ကမ်းနားလမ်း ကနေ တည့်တည့် လာနေတဲ့ ကားတွေ ရှင်းအောင် ထပ်စောင့် ရမယ်။
လှည်းတန်းဘက်ကလာတဲ့ ကား တွေ အထွက်နေရာကို ပိတ်မနေအောင် Yellow Box တွေ ဆွဲမထားလို့ ကတော့ သေပြီဆရာ စောင့်ပေတော့။
ရှိလဲ ပိတ်ရပ်နေကြမှာ အမှန်။
နှစ်ဖက်လမ်း က ဘယ်လို လွယ်လွယ် နဲ့ ရှင်းပါ့မလဲ။
ဘယ်လို လုပ်ပြီး လွယ်လွယ် မြန်မြန် သွားနိုင်ပါ့မလဲ။
ပုံမှန် မီးပွိုင့် ကနေ ကွေ့တာက ပုံစံအမှန် နဲ့ အန္တရာယ်လဲကင်း ပိုလဲ မြန်နိုင်ပါတယ်။
ပုံစံမှား နေတာကို မစဉ်းစားကြည့်ဘဲ ပြည်သူတွေကို နားလှည့် ပါးရိုက် နေတဲ့ ဥပဒေတွေ၊ စနစ် တွေအားလုံး ကို မြေလှန် ပစ်သင့်ပါပြီ။
ဒီတော့ တစ်ယောက်ယောက်က ဦးစီးပြီး အဲဒီ မီးပွိုင့် ကို ကွေ့လိုင်း ပေးဖို့ စာတင် သင့်ပါတယ်။
စာတင်တာကို အရေးမလုပ်ရင် ဂဇက်ရွာက တာဝန်ရှိ လူကြီးများ ဦးဆောင်ပြီး အဲဒီ မီးပွိုင့် မှာ စန္ဒာ လေးပြသင့်ကြောင်း အကျိုးမျှော် နှိုးဆော် လိုက်ရပါကြောင်း။
(ဦးဆောင်သူ များကတော့ ဒါဏ်ထိခံထားရတဲ့ ကကြီးမိုက် နဲ့ မမ တို့ ဖြစ်သင့်ကြောင်း အဆိုတင်သွင်းပါတယ်)
အမှန်တော့လည်း အဲဒီဖရီးဝေးလမ်းက နှစ်လမ်းမောင်းဖြစ်တာ မကြာသေးဘူးထင်တယ်။
အခုနောက်ပိုင်း လမ်းတွေကြပ်လို့ လမ်းလယ်တုံးတွေ ချကာမှ ဖြစ်တာနဲ့ထင်တယ်။
မလတ် တင်သွင်းတဲ့အဆိုကို ထောက်ခံပါတယ်။
သတိမထားမိကြလို့ ပါ ။
ဟုတ်ကဲ့ …ကဲ့  ကဲ့
တစ်စီးမှားရင်း အနဲဆုံး …. ၅၀၀၀ (ပြောတတ် ဆိုတတ် ငိုတတ် )
ကားအကောင်းစားများ / နောက်ဆုံးပေါ်များ……၁၅၀၀၀ ထက်မလျော့ 
ဆိုတော့ ကာ ——
မောင်ပြန်လာရင် ဘဲကင်ဝယ်ခဲ့မယ် …. ခင်ကြိုက်တတ်တဲ့ ယိုးဒယားဒူးရင်းသီးကြီးလည်း
ဝယ်ခဲ့ဦးမှာ ….ပြီးရင်လေ ညဘက် ဂျန်းရှင်းစကွဲမှာ ရှော့ ပင်ထွက်ပြီး
အဲဒီက ကိုရီးယားကလာဖွင့်တဲ့ ဝဟမ်ဘာကာလေးဆွဲပြီး 3D ရုပ်ရှင်ကြည့် ကြမယ် …
ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ခုမှပဲ သိတော့တယ်။ :hee:
အဟီးးးးးး ဆိုတတ်ငိုတတ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ ၂စီးမိတာဆိုတော့ လက္ကားဈေးနဲ့ ရလိုက်တာ။
ဟိ… ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေတုန်းကမှ အိုက်လမ်းကြောင်းကို တက်စီသမား မှားကွေ့လို့
ဆရာသမားက ခပ်တည်တည်ဘဲ လက်လေးပြပီး ဆက်မောင်းတယ်ဗျာ
ဒါမှ … အိမ်အပြန် မျက်နှာပန်းလှမှာပေါ့
မြောက်နေတဲ့ စိတ်ကလေးတောင် ဘုတ်ကနဲ ပြန်ကျသွားပြီ။ :buu:
ဘဲဥ ဘဲဥ နဲ့ခေါ်လွန်းလို့ထင်ပါရဲ့။ ဦးထုတ်တောင်ပြောင်းလိုက်ပြီ။
ဦးထုပ်ပြောင်းလိုက်တော့ နောက်ဆုံးပေါ် ဘယ်လိုခေါ်နေကြသလဲ မသိဘူး။
ဟိုတနေ့က အဲဒီမီးပွိုင့်ထိပ်မှာ ဖမ်းတဲ့ရဲနဲ့ ရန်ဖြစ်နေတာ အန်တီမမပေါ့။ ( အရဂါးနောက်ဒါ )
ဟုတ်ပါ့ရှင် အဲဒီလမ်းက သွားနေကျတွေသိပေမဲ့ သွားနေမကျရင်မသိလို့ မီးပွိုင့်ကနေကွေ့ကြတယ်။ တက်ဆီ သမားတွေတောင်မသိကြဘူး။ ဟိုနေ့ ကတော့ ဘဲဥနဲ့ရန်ဖြစ်နေကြတာတွေ့တယ်။ ဟိုကလဲဖမ်း မယ်ပေါ့။ ကားသမားကလဲ မင်းတို့ပြထားပါလား ပေါ့။ အဲလိုအဲလိုရန်ဖြစ်နေကြ တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဘဲဥလေး ကျကွဲတွားရှာဒယ်။
(အဲဒီမီးပွိုင့်ထိပ်မှာ ဖမ်းတဲ့ရဲနဲ့ ရန်ဖြစ်နေတာ အန်တီမမပေါ့။ ) လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။
ပုဆိုးခြုံထဲက လက်သီးပြဆိုတဲ့ စကားပုံက အန်တီမမအတွက်များ တီထွင်သွားခဲ့လေသလား မသိဘူး။
ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးမှာ သွားနေကျလူတွေမှ သိတဲ့ ထောင်ချောက်တွေ အများကြီးပါပဲ။
အလုံလမ်းနဲ့ မြို့မကျောင်းလမ်း ဆုံတဲ့နေရာက ဖရီးဝေးကို မသိပဲ ဘရိတ်အုပ်လို့ နောက်က ၀င်အောင်းပြီး အတိုက်ခံ အလျော်ပေးတဲ့ ဇာတ်လမ်း တွေ့ဖူးပါတယ်။
lane ၃ခု ရှိတဲ့ လမ်းတွေမှာ တစ်ချို့ မီးပွိုင့်က တည့် ၂လိုင်းဘယ်ကွေ့ ၁ လိုင်း၊(အလုံလမ်းနဲ့ ပြည်လမ်းဆုံ-ပြည်လမ်းမ)
တစ်ချို့ မီးပွိုင့်က ၃လိုင်းလုံးတည့်သွားလို့ရတယ်။ဘယ်ဖက်က တည့်ရော ကွေ့ရော ရတယ်( ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်းနဲ့ ပြည်လမ်းဆုံ)
လမ်းညွှန်က မီးပွိုင့်မှာကားများရင် ကားတွေနဲ့ ဖုံးနေတယ်။
အနားရောက်မှ ဘွားကနဲ တွေ့တော့ ကွေ့ရမလို တည့်ရမလိုဖြစ်ရော။
အဲဒီတော့ စည်းကမ်းလိုက်နာချင်သူတွေတွက် ကသိကအောင့်တွေဖြစ်၊
သံရုံးကားတွေတောင် ကွေ့လိုင်းကနေ တည့်မောင်းချသွားကြသေး။
အဲဒီလို အများမလိုက်နာနိုင်မယ့် စည်းကမ်းဥပဒေကို ထားထားလို့ စည်းကမ်းဆိုတာ အလကားလို့ မြင်လာကြတာပေါ့။
တကယ်ဆို လမ်းပေါ်က အမှတ်အသားတွေဟာ တပြေးညီ ဖြစ်ရင်ဖြစ်၊
အခြေအနေအရ မဖြစ်နိုင်လို့ ထူးခြားမှု ရှိနေရင် ဝေးဝေးက သိသာထင်ရှားအောင် ပြပေးရမယ်။
လမ်းပေါ် မျှားဖြူလေးတွေဆွဲတာ ကုန်ကျစားရိတ် မများပါဘူး။
နောက်တစ်ခုက ယာဉ်ထိန်းရဲရဲ့ အဓိက တာဝန်ဟာ ယာဉ်တွေ လမ်းပေါ် အန္တရာယ်ကင်းကင်း ချောချောမွေ့မွေ့ မောင်းနှင် ခရီးသွားနိုင်ရေးတွက် ကူညီဖို့ပါ။
တစ်နေရာက ထိုင်စောင့်ပြီး ဘယ်သူမှားမလဲ၊ဘယ်သူ လိုင်စင်မပါဘူးလဲ၊ဘယ်သူ့ကို တောင်းစားရမလဲ လုပ်နေဖို့ မဟုတ်ပါ။
လင့်ခ်လမ်းထိပ်က ခင်မြင့်မောင်လို နေပူထဲ အပင်ပန်းခံ လမ်းရှင်းပေးနေတဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲမျိုးကို လူထုက ဂုဏ်ပြုကြတာကို အားမကျကြဘူး။မရှက်ကြဘူးနော်။
RC2နားမှာဆို ဒီကနေ့ထိ အရိပ်ကလေးကစောင့်ပြီး ခွင်ဝင်မယ့်ကားတွေ တားတားရစ်နေတဲ့ အဖွဲ့ရှိသေးတယ်။
ကိုယ်တွေတောင် နေပူထဲ ထီးဆောင်းသွားရင်းတောင် ပူလွန်းလို့ ညည်းနေရတာ။
အဲဒါကြောင့် အဲဒီနားကဖြတ်သွားတိုင်း အဲဒီယာဉ်ထိန်းရဲကို ဆုတစ်ခုခု (လာဘ် မဟုတ်) ပေးချင်စိတ်ပေါ်မိတယ်။
ကားနဲ့ဖြတ်သွားတာဆိုတော့လည်း ကားရပ်ဖို့အဆင်မပြေတာနဲ့ တခါမှလည်း မပေးဖြစ်ဘူး။
တစ်နေ့နေ့တော့ ပေးဖြစ်အောင် ပေးအုံးမယ်လို့ :hee:
အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပါ။ သူတို့နေရာမှာသွားလုပ်ကြည့်ပါ။ သူတို့လစာနဲ့မိသားစုတခု လက်တွေ့ ရပ်တည်ဖို့ကျိုးစားကြည့်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို ကိုယ်ခြင်းစာတတ်လာပါလိမ့်မယ်။ တခါတရံမှာ ကိုယ်တိုင်ခံစားရမှရင်တွင်းဖြစ်လေးတွေ ထွက်လာတတ်ပါတယ်။
အနော် တို့ မြန်မာပြည်ကြီးက ရှေးရိုးကို အားကြီးထိန်းလို့ ပါ ။
ဟိုးရှေးရှေး က ကားလေး ငါးခြောက်ရာလောက်ဘဲ ရှိတုန်းကလည်း မီးပွိုင့် မှာ လမ်းညွှန်စပြတဲ့ အမှတ် ၊လိုင်းခွဲ တဲံ အကွာ အဝေးက ဒီလောက် ..
ကားလေးငါးထောင် ရှိလာတော့ လဲ အဲ့ဒီ့ အကွာအဝေး
အခု သိန်းချီလာတော့ လဲ အဲ့ဒီ့ အကွာအဝေးက မပြောင်းသေးဘူး ။
ဘယ်ပြောင်းမလဲ … လမ်းအမှတ်အသား ဆွဲ လမ်းခင်းတာ က တစ်ဖွဲ့
ယာဉ်ထိန်းရဲ က သတ်သတ် ။
အခုတော့ ဖွဲ့လိုက်ပြန်ပြီ နောက်တစ်ဖွဲ့ ။ ဘာလုပ်ကြဦးမလဲ တော့ မသိဘူး “ရန်ကုန်မြို့တော် အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အာဏာပိုင်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း”
အဲ့ဒီ့ထဲ အဆိုးဆုံးကတော့ သွားလေသူ ဦးနေ၀င်းကြီး နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ လကျာင်္ကပ်မောင်းစံနစ်ပြောင်းပစ်ခဲ့တာဘဲ ..
လက်ယာဖက်ကားမောင်းသူထိုင်ရတဲ့ဂျပန်ကားအသုံးများတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ.. လက်ယာကပ်မောင်းစနစ်က.. ကားပိတ်ဆို့မှုကိုတင်မဟုတ်.. မတော်တဆမှုတင်းကြမ်းတက်သွားစေပြီး..လူ့အသက်တွေပါ..သိန်းချီသတ်ပစ်တယ်လို့.. ပြောလို့ရပါတယ်..။
လက်ဝဲကပ်မောင်း ပြန်မပြောင်းတာ အတော်ဆိုးပါရဲ့..
အိုဘယ့် RightaWrong !
တော်သေးဘီ သဂျီးနဲ့ မာမားရေ..
ကထူးဆန်း မန့်တာကိုဖတ်ပြီး ……
သစ်ပင်တွေကို စိုက်တဲ့သူက တစ်ဖွဲ့၊ ခုတ်တဲ့သူက တစ်ဖွဲ့လို့ လူရွှင်တော်တွေ ပျက်လုံးထုတ်ဖူးတာကို သတိရမိတယ်။ :harr:
ကိုယ်တိုင်တော့ စပြီး အမောင်းသင်ကတည်းက ညာမောင်းကားကို ညာမောင်းလမ်းနဲ့ပဲ မောင်းလာခဲ့ရလို့လား မသိဘူး….
အခုဝင်လာတဲ့ ဘယ်မောင်းကားကို မောင်းရင် ကန့်လန့်ဖြစ်နေသလိုပဲ။
တစ်ဦးတည်းသော သားရေ (နာမည်မခေါ်ရဲလို့)
ညာမောင်းကားတွေအစား ဘယ်မောင်းကားတွေချည်းပဲ သွင်းခိုင်းရမလား။
Asaformer British colony, cars in Burma drove on the left until 1970; the military administration of Ne Win decreed that traffic would drive on the right hand side of the road beginning7December 1970. It is alleged that this was because Ne Win had been advised by his astrologer, who had said “move to the right”. In spite of the change, most passenger vehicles in the country continue to be RHD, being pre-changeover vehicles and second-hand vehicles imported from Japan, Thailand, and Singapore. Buses imported from Japan that were never converted from RHD to LHD, have doors on the right side in offset position, unlike their counterparts in the Philippines. However, government limousines, imported from the People’s Republic of China, are LHD. Virtually all vehicles are driven withapassenger calleda“spare” (စပယျရာ) in place to watch the oncoming traffic and inform the driver as to whether it is safe to overtake or not, as the driver cannot see this from the RHD position.
ဟုတ်ကဲ့ ..ရှာကြည့်မိတော့ .. ကမ္ဘာမှာ ဘယ်ကပ်မောင်းနဲ့ ညာကပ်မောင်း အလယ်
သည်တော့ ညာကပ်မောင်းဖြစ်သင့်သည် ဘယ်ကပ်မောင်း မဖစ်သင့်လို့တော့ အလွယ်ပြောမရဘု..။
ဘာကြောင့်လဲဆို ကားသမားအများစုက ဂနေ့သည်တိုင်းပြည်နက်ဖန် ဟိုတိုင်းပြည် စသည်
ရွေ့လျှားမောင်းနှင်နေမှာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာသာ မောင်းနှင်နေမှာမို့ ကမ္ဘာနဲ့တန်းညှိဖို့ အကြောင်းမရှိလို့ပါပဲ။
ဒါဆိုဘာနဲ့တန်းညှိရမလဲဆိုရင် သွင်းယူတဲ့တိုင်းပြည်တွေက ထုတ်တဲ့ ကားမှာပါတဲ့ ဘယ်-ညာ နဲ့ပဲ တန်းညှိရမှာပါ
၉၀% ဂျပန်ကားတွေသွင်းတယ် ဆိုမှတော့ ဗျာ ..
ဒီ၂နှစ်လောက်အတွင်း တဖက်မှာ ဂျပန်အစိုးရက ကြွေးတွေပက်ပက်စက်စက် လျှော်ပေးတယ်
နောက်တဖက်မှာလည်း ဂျပန် တပါတ်ရစ်ကားတွေ လှိမ့်သွင်းလာတယ်…(အားလုံးညာမောင်းတွေ)
ကိုကိုကြောင်တို့ ပြောနေတာတော့ ..နိုင်ငံရေးမှာ တိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာမရှိဘူး တဲ့
သည်တော့ ကင်းအောင်မနေနိုင်ရင်တော့ ပိုကောင်းတာ ကို ပြောင်းသုံးယုံရှိတာပေါ့ဗျာ…။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ညာကပ်မောင်းသုံးကြတဲ့ အနောက်က ကားတွေသွင်းရင် စားရိတ်ပိုမယ်။
တရုတ်ကားလည်း လူတွေနှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်မဟုတ် လို့ပါ။
မတူတဲ့အတွေးနဲ့ ကပ်သီးကပ်ဖဲ့ မန့်ရရင်ဖြင့် … ဒီလူတွေ ကားတွေကို အလယ်မောင်း (ရှေ့တန်း၃ယောက်)
ဘယ်-၁၊ ဒရိုက်ဘာ ၊ ညာ-၁
နောက်တန်း၃ယောက် ထိုင်။ ၆ယောက်စီးကားတွေ မထွင်ခဲ့ပါလိမ့်နော်…။
၂ယောက်(၄) စီး တူးဒိုစ်း ကားတွေ အိမ်သုံး ၄ယောက်စီးကားနဲ့ ၁၀ယောက်စီး ဗန်တွေကျ ထုတ်ပြီး
၃ယောက်စီး ၆ယောက်စီး ၉ယောက်စီး ကားတွေကျ ဘာကြောင့်မစဉ်းစားဂျဘာလိမ့်…
ဘယ်မောင်းညာမောင်း ပူစရာ မလိုတဲ့ ယူနီဗာဆယ် ကား .. uCar ဆိုပီး လုပ်စေဂျင့်။
အိုဘယ့် uSportType,uSedan, uVan, uSUV လေးဒွေ
အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ.. ကပ်ရက်တိုင်းပြည်ထိုင်း..ချိုင်းနားနိုင်ငံတွေနဲ့ညှိပြီး.. တခုခုပြတ်ပြတ်လေး..လုပ်သင့်တယ်..
လူတွေများ.. မျက်နှာချင်းဆိုင်လမ်းလျှောက်လာရင်းတွေ့ရင်.. ဘယ်ညာ.. ဘယ်ဖက်ရှောင်ရမှန်းမသိ..
ငယ်ငယ်ကထိုးခဲ့တဲ့..ထုတ်ဆီး.. မြို့ပလက်ဖေါင်းတွေမှာ… ထိုးထိုးနေကြရသပေါ့..
ကတွတ်ပေါက်က စောင့်တဲ့ဘဲဥမှာ အတည်ပေါက်ကြီးလဲရှိသေး မမရေ…
မင်းတို့ကောင်တွေ စည်းကမ်းကို မရှိဘူး..စည်းကမ်းကို မလိုက်နာ ဖောက်ဖျက်လို့
ပြည်သူတွေ ထိခိုက်သေကုန်ကြရတာ…ပေးလိုင်စင်၊မရဘူးကွ…မင်း လိုင်စင်ပေးနဲ့
လူတွေရှေ့ အတည်ပေါက်ကြီး…ဒရိုင်ဘာက ရှေ့နားသွားရပ်ထား…စပါယ်ယာကသွားညှိ
10 မိနစ်လောက်ကြာတော့ မောင်းဆရာရေ..အသံနဲ့ စပါယ်ယာပြန်လာတယ်…
5000 တောင်းတာ…3000 နဲ့ မနဲတောင်းပန်ညှိခဲ့ရသတဲ့လေ…
တော်သလို ကြည့်ုလုပ်နေကြတာ အရိုးစွဲနေကြပြီ။
အဲလို အဲလိုတွေကြောင့် စည်းကမ်းမလိုက်နာကြတာတွေပါတယ်။
စည်းကမ်းချမှတ်တဲ့သူတွေဘက်ကလည်း စည်းကမ်းအတိုင်းဖြစ်ဖို့ထက် မှားတဲ့သူကို ခွင်ဆင်ဖို့စောင့်တယ်။
ပြည်သူတွေဘက်ကလည်း မသိလို့ မှားတာကတမျိုး၊
သိလျှက်နဲ့ လစ်ရင် စည်းကမ်းချိုးဖောက်မယ်၊ မိရင် ညှိကြမယ်ပေ့ါ။
ပျက်အစဉ် ပြင်ခဏ တဲ့ချစ်မမရေ :harr: တကယ် ခဏပဲခံနောက် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတာပဲ။
မြန်မာပြည်ပြောင်းလဲနေတာကို ချစ်မမနော် အပိုဇစ် အိုင်း နဲ့မကြည့်ဘာနဲ့
အပိုဇစ်အိုင်း…. တယ်စာ တဲ့ ဆိုပါလား။
အဲ- တယ် ဆို တဲ့ စာပါလား။ :harr:
လူလည်း မျက်မှန်မဲကြီးပဲ တပ်ကြည့်နေမိတယ် ထင်ပါရဲ့။ :buu:
ချစ်မမရေ ရွဲ့ပြောတာနော် ဘယ်ကမျက်မှန်မဲကြီးတပ်ရမှာတုန်း အလိုလိုကိုမဲမှောင်နေတာ :harr:
ပြောတော့ တိုးတက်နေပြီဆိုပဲ ချစ်မမရေ
အဲသည် ဖရီးဝေးက အရင်ကတည်းက ရှိပါတယ်။
နာနတ်တော ခုံးကျော်လဲမရှိသေးပါဘူး၊ အခုနာနတ်တောခုံးကျော်ကိုသွားတဲ့လမ်းမကြီးဟာ အဲသည်တုန်းက ဆင်မလိုက်ကားဝင်းကြီးရဲ့ နောက်ဖေးလမ်းကြားပါ။ အဲဒီတုန်းက လှည်းတန်းလမ်းရယ် ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနားလမ်းရယ် က တဆက်ထဲလမ်းကျယ်ပါ အဲသည် လမ်းကြီးကို ဘုရင့်နောင်လမ်းသေးကထိပ်တိုက်ဝင်တဲ့အခါ တီပုံစံမယူပဲ စမူဆာပုံစံ လမ်းလယ်ကျွန်းကို နှစ်လမ်းသွားတွေက ပတ်သွားတဲ့ပုံစံလုပ်ထားတာပါ။ နမူနာအနေနဲ့ပြောရရင် အခု လေးဒေါင့်ကန်လမ်းမကြီးကနေ ဇ၀နဂျန်းရှင်းအရောက်မှာ ဘယ်ဘက်ကွေ့သွားတဲ့လမ်းကို တီပုံစံ ထိပ်တိုက်မယူပဲ မီးပွိုင့်မထားချင်တာကြောင့် စမူဆာပုံစံလမ်းလယ်ကျွန်းခံပြီး နှစ်လမ်းသွားအတိုင်း ခွဲထွက်စေတဲ့ပုံမျိုးပါ။
၈၈ အရေးအခင်းဖြစ်တယ်၊ န၀တ တက်လာတယ်၊ ကမ်းနားပတ်လမ်းကို ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးဆိုပြီးလေးဆချဲ့ပြီးဖေါက်တယ်။
အဲသည်မှာ ဘုရင့်နောင်လမ်းကျယ်ကြီးအတွက် စမူဆာလမ်းလယ်ကျွန်းကို ဖဲ့ပစ်လိုက်တော့ သေးသေးရှည်ရှည်လေးပဲကျန်တော့တာပါ။
အဲသည်ကတည်းက လေးတန်းအောင်တဲ့သူသာလုပ်ခဲ့ရင် လှည်းတန်းလမ်းဘက်သွားတဲ့နှစ်လမ်းသွားကိုပိတ်ပြီးတီပုံစံ မီးပွိုင့် တစ်ခါတည်းလုပ်ရမှာ။
နောက် ဆယ်နှစ်ကြာတော့ ဆင်မလိုက်ကားဝင်းကို လက်ညှိုးထိုး အလကားပေးလိုက်တဲ့အခါ ဆင်မလိုက်ကားဝင်းနောက်ကလမ်းက လမ်းကျယ်ဖြစ်သွားပြီး ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးနဲ့ထိပ်တိုက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲသည်မှာ ခုံးကျော်လဲဆောက်၊ အတည့်သွားဖို့လဲ နှစ်လိုင်းပေးလိုက်ပြီး ညာအစွန်လိုင်းကိုတော့ ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနားလမ်းကိုသွားဖို့ ဖရီးကြောလုပ်လိုက်ပါတယ်။ (အရင်ကတည်းကလဲ ဖရီးကြောပါပဲ)
အဲသည်မှာတင် ရှေးခေတ် လက်ဝဲကပ်မောင်းခေတ်တုန်းကတည်းက လက်ဝဲကပ်မောင်းအတွက်လုပ်ထားတဲ့ လှည်းတန်းအ၀င်နှစ်လမ်းသွားလေးဟာ မြစ်ကျိုးအင်းသဖွယ်ဖြစ်ပြီး အခုထိ မှားယွင်းစွားအသုံးပြုနေရတော့တာပါပဲ..။
ဖြေရှင်းနည်းကတော့ လေးတန်းအောင်တဲ့သူတွေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရမယ့်နေ့ကိုစောင့်ပါ…။
ဦးပါပြောမှပဲ လမ်းရဲ့ ရာဇ၀င်ကို သိရတော့တယ်။
ကိုယ်တိုင်တော့ ဘုရင့်နောင်လမ်းဖောက်ပြီးမှပဲ အဲဒီလမ်းကို သိတော့တာ။
အရင်ကတော့ ဘုရင့်နောင်လမ်းကနေ ညာဘက်ဖရီးဝေးနဲ့ ကန္နားလမ်းကိုပဲ သွားနေကျ။
လမ်းလယ်တုံးတွေကို လှည်းတန်းလမ်းရဲ့ ညာဘက်ဖရီးဝေးနေရာနားမှာ ဖွင့်ပေးထားတာတော့ တွေ့နေပေမယ့် သတိမထားမိဘူး။
ကားတွေလည်း မီးပွိုင့်ကနေ ကွေ့နေတာ တွေ့တွေ့နေတာပဲ။
အဲဒီပွိုင့်မှာ ကွေ့သွားတဲ့ကားတွေကို လှမ်းခေါ်နေတာ မကြာခဏတွေ့တွေ့နေတော့ ….
ကားသမားတွေကို ကယ်တင်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကုသိုလ်ပြုလိုက်တာ။ :harr:
၀င်လာတဲ့လက်စ ဖတ်သွားပါတယ် မှတ်သွားပါတယ်…………….